Halis soo wajahdey cilaaqaadka wadamada Itoobiya iyo Mareykanka
Addis Ababa iyo Washington oo xulafo ahaa sanado badan ayaa u muuqda mid sii kala fogaanaya
ADDIS ABABA, Ethiopia - Dowladda Itoobiya ayaa ka dalbatay Mareykankaay inay sharaxaad ka bixiyaan hadal ka soo yeeray madaxwayne Donold Trump.
Qoraal ay soo saartay wasarada arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa lagu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya ay u yeertay safiirka Mareykanka u fadhiya magaalada Addis Abab.
Mar sii horreysay ria'sul wasxaaraha dalka Itoobiya ayaa sheegay in dalkiisa " uusan u dulqaadan doonin daandaansi ama gardaro noocey doonto ha ahaa " ka dib markii madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in Masar ay burburin karto biya-xireenka ay Itoobiya ka dhistay wabiga Nile.
Dr Abiy ayaa wacad ku maray in Itoobiya ay dhameystiri doonto Biya-xireenka.
"Itoobiya isma dhiibi doonto gardara noocey doonto ha ahaatee," ayuu yiri.
"Itoobiya waligeed jilbaha uma dhigan oo ma adeecin cadowgeeda, balse waxay xushmeysaa saaxibadeed, ma sameynayno maanta mustaqbalkana ma sameyn doono."
Hanjabaad kasta oo arrintan ku saabsan waa "mid aan loo meel dayin, oo aan natiijo ka soo baxeyn islamarkana jabinaysa shuruucda caalamiga ah". Ayuu intaa ku daray.
Hadalka rai'sul wasaaraha Abey Axmed ayaa ka dambeeyay ka dib markii madaxweynaha waddanka Mareykanka, Donald Trump, uu sheegay hadal guux badan ka kicyay gudaha waddanka Itoobiya. Trump ayaa tilmaamay in Masar ay burburin karto biyo-xireenka wayn ee ay Itoobiya ka dhinac dhisayso Webiga Nile.
Trump ayaa hadalkaasi ka sheegay shir dhinaca taleefanka ah oo ay heshiiska diblumaasiyadeed ku gaarayeen dalalka Suudaan iyo Israa'iil, markaas oo ay khadka ku jireen madaxda labadaasi dal.
Madaxweyne Trump ayaa weriyayaasha Aqalka Cad waxa uu ugu sheegay "Waa xaalad aad u halis badan sababtoo ah Masar sidaas ugama samri karto arrinta."
"Ugu dambayntii biyo-xireenkaas way burburin doonaan. Waan iri kor ayaanan u leeyahay - biyo-xireenkaas way burburin doonaan. Waana inay wax sameeyaan," ayuu sii raaciyay Trump.
Madaxweyne Trump intaas kuma uusan ekaan ee waxa kale oo uu tilmaamay in Masar ay arrintaasi ka seexatay: "Waa hore in uusan bilaaban ayey aheyd inay joojiyaan," ayuu yiri.
Dhanak kale ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi, Hailemariam Dessalegn, ayaa si caro leh arrintaas uga falceliyay.
Dessalegn ayaa farriin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in hadalka Trump uu u sheegay ra'iisul wasaaraha Suudaan uu yahay mid aan loo meel dayin.
Dowladda iyo dadka Itoobiyaba waligood laguma handadin bayaan aanay mas'uuliyad ku dheehnayn oo noocaasi oo kale ah. Taariikhdaa macallin inoo ah.
Safiirka dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay Xaaladda amni ee dalka Soomaaliya...
Afrika 01.08.2018. 16:29
Itoobiya iyo Kenya oo la siiyey sahay ay isaga caabiyaan halista Al-Shabaab
Afrika 03.10.2020. 10:32
Afrika 22.11.2020. 08:34
Taariikhda Biden: Mahadhooyinka shaqsiga ah iyo dhabihii Aqalka Cad
Caalamka 08.11.2020. 07:00
Dhawaqii Trump oo god mugdi ah sii geliyey muranka biyo-xireenka Nile
Afrika 01.11.2020. 06:46